मेरो गन्थन: May 2009
Posted by inashrestha at 12:00 PM2comments: Links to this post
Posted by inashrestha at 12:00 AM 1 comment: Links to this post
यी विभिन्न घर तथा सार्वजनिक उपयोगका निर्माणहरु बनाउदा आर्किटेक्टले आफ्नो डिजाइन १-२ चोटि पक्कै पनि रिभ्यु गरे होलान । तर प्लान पढ्नेले उल्टो बुझिदिए पछि कस्को बाउको के लाग्छ । अनि बनाउनेले कसरी बनाउने ? कमन सेंस भन्ने पनि रहेन छ त ठेकेदारको (नरिसाउनु होला आजकल निर्माण व्यवसायी भनिन्छ क्यारे तर बोलिचालिमा ठेकेदार भनेर बुझिने भएकोले मात्र यहाँ प्रयोग गरेको हुँ अन्यथा नलिनु होला ) । त्यो भन्दा पनि आश्चार्य लाग्दो के छ भने इन्स्पेक्सन गर्नेले के हेरेको हो? इन्स्पेक्सन भैसके पछि थपेको भन्न पनि अप्ठेरो सबै । फेरि बनाउँदा खेरी नियमित सुपरिवेक्षण नहुने रहेछ की त । घर मालिक आफ़ैले बनाको पनि हुनसक्छ । तर कति त सार्वजनिक प्रयोगका निर्माणहरु पनि छन् (जस्तो भर्र्याङ्ग, ATM, पुल, शौचालय आदि ) । त्यो कसरी सम्भव भयो अचम्म लाग्छ बा ! यस्तो हुनुमा गल्ती कस्को हो छुट्टाउने जिम्मा चैं पाठकहरुलाई नै !
यो भर्र्याङ्ग के को लागि हो कुन्नि ?
यो सेक्युरिटी क्यामेराले कसरी काम गर्छ होला ?
रेल आयो भने के गर्ने हो खोई ?
बार्दलीमा कसरी जाने होला?
टाउको नठोकिने कुनै उपाय छ कि ?
त्यो झ्याल चैं कसरी सोझ्याउने होला अब ?
पुल कस्ले जोड़न बिर्सेछ हँ ?
ATM बाट पैसा झिक्न कै सास्ती ।
सड़क बत्ती पनि छोपियो । नगरपालिका के हेरेर बस्या होला ?
खोई त ढोका ?
कसरी माथी चढ़ने लौ भन्नुस त ?
यो चैं कता पट्टिकोले पहिले प्रयोग गर्ने हो?
Posted by inashrestha at 11:00 AM 1 comment: Links to this post
Posted by inashrestha at 1:10 AM No comments: Links to this post